Njedebe nke Asus Padfone: A ekwentị na ngwakọ Mbadamba ụrọ
Njedebe Asus Padfone: A ekwentị na ngwakọ Mbadamba ụrọ
Afghanistan Ministry of Health, Fantom na Chekkit Technologies nke dabeere na Nigeria na-ekwuputa National Rollout of Drug Tracking System
"Site n'ịgbalite onwe gị na-aga n'ihu ị nwere ike ịlanarị ohere ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nwoke ma ọ bụ nwanyị gị" - Zenab Abass, onye njikwa azụmaahịa, Vertiv, Middle East na Africa
Guzobere Institute Lagos mepee ngwa maka Cohort V
10 awa gara aga
Top 4 Paygwọ Appsgwọ ingwọ na Nigeria
17 awa gara aga
South South entrepreneur? Tinye maka Mmemme Grindstone
Edtech Startup iXperience na enweta ego $ 2.5M Series A
Afrika SME? Tinye maka UN Summit Systems Summit 2021 (US $ 2,000)
Ọrụ AIKI ga-ewepụta 'New Collar' Sector Platform
Ebumnuche ụlọ ọrụ abụọ nke Ivorian na-ebuli Ego Mkpụrụ sitere na VC Firm, I&P
AWIEF Growth Accelerator meghere maka Women ndi oru buu igba n'ulo na SA
GoDo Hub na-ekwupụta ndị otu Board Advisory, na-anabata onye isi nchịkwa ọhụụ
Usoro nke teknụzụ: Teknụzụ Blockchain bụ ọdịnihu nke Afrịka - Idowu Akinde
Nke a abụghị ekwentị gị kwa ụbọchị. Ekwentị nwere ike na ndị ọzọ ihe ike a mbadamba modul iji ya Operating System! Ihu ọma, nke a pụtara na ị nwere ekwentị na mbadamba ihe niile n'otu ngwaọrụ.
E wezụga ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya, padFone a na-abịa na njirimara HD zuru oke na nhazi 1.7GHz quad-core Snapdragon 600
Ihe owuwu nke PadFone jiri alloy alloy aerospace-ọkwa. Ihe mkpuchi ya bụ ọla zuru oke nwere ụkpụrụ ahịhịa kwụ ọtọ gafee azụ. Mgbe elere ya anya na ala ma ọ bụ n'elu, PadFone na-egosi na ọ ga-adịtụ ntakịrị 8.9mm agba na etiti na 6mm gburugburu n'ọnụ ya.
Usoro dị nro nke azụ nwere ike imebi njide ekwentị, mana ọ mere ka ọ kwụsị na njedebe. Nke a na-enye ya mmetụta siri ike karị. Azụ nwere ụkpụrụ ọla na-egbu maramara nke ọma. Nke a na-enye ekwentị nlezianya dị ọcha.
Ihuenyo ihu na-eguzogide ọkọ. Ọ na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihu dum nke na-ahapụ 1mm chamfer niile gburugburu ahụ dị ọla. Nke a na - ebelata ohere nke nbibi ihuenyo ma ọ bụrụ na a daa ya.
Ngosipụta nke PadFone bụ a 5inch full HD 1080p quad isi mgbawa ngosi. Nke a na-eme PadFone a anụ ọhịa na usoro nke mkpebi, ikiri n'akuku na agba.
N'akụkụ, ekwentị nwere nkecha matt imecha nke otu agba dị ka azụ. Ndị na-ekwu okwu n’ekwentị nọ n’akụkụ aka nri. Ha dị n'elu bọtịnụ ike na njikwa olu nke ngwaọrụ ahụ. N'akụkụ aka ekpe bụ pin-ejection tree. Na tray bụ nano-SIM kaadị.
Ekwentị ejirila polycarbonate ejiri nwayọ gbanwere elu na ala nke ekwentị ahụ. Nke a na-enye ekwentị impeccable n'ikuku n'agbanyeghị dara ahu. A 3.5mm jaak maka ekweisi nọ n'ọnọdụ. N’okpuru ekwentị bụ oghere maka microUSB na igwe okwu. Oghere microUSB dị n'agbata oghere abụọ maka mpi mpụga nke mbadamba mbadamba na akara ngosi cellular.
Ihe ngbagha nke PadFone enweghi ngwụcha bụ eziokwu na enweghị ohere maka mgbasa microSD. Ekwentị na-abata na ma 32GB or 64GB modul. Nke a bu ugwo na ASUS ' 50GB nke igwe ojii nchekwa maka afọ abụọ. Nke a bụkwa USB OTG maka nchekwa ndị ọzọ.
Na ọdụ PadFone nke mbadamba, PadFone ebighebi n'ọdụ ụgbọ mmiri kwụ ọtọ. A na-ejide ya site na nkedo roba silicone roba anọ.
O nwere batrị 5,000mAh. A na - eme ka ndụ batrị ahụ dịkwuo mma site na usoro na ngwanrọ nke na-ebuli arụmọrụ batrị.
Ekwentị na-adịgide ndụ anya ASUS iji hazie gam akporo. Otú ọ dị, e nwere nhọrọ nke gwụ ụfọdụ nke ahaziri ntọala ka kpochapụwo android ntọala. O nwekwara ngosi di omimi nke na-eme ka ngwa dị ugbu a dị ndụ na ịgbanwee n'etiti ọnọdụ ekwentị na ọnọdụ mbadamba.
Ekwentị na-abịa na ọtụtụ mgbanwe na njirimara ụdị mkpirisi dị elu na ịpị bọtịnụ ụlọ. Ọzọkwa ugbu a ị nwere ike ịgbanwe ihu igwe dị iche iche dị ka ntụrụndụ ma ọ bụ ọrụ.
Ekwentị dakọtara na ngwa ASUS gam akporo yana ngwa gam akporo ndị ọzọ. Na mgbakwunye na, ndị ọzọ ngwa mgbakwunye ndị ọzọ sitere na egwu na ntụrụndụ na ịkparịta ụka n'ingntanet na-abịa na ekwentị akara ngosi a
Ekwentị PadFone Infinity na-eme ka ihe mmetụta 13megapixle mara. Ọzọkwa nwere amamiihe f / 2.0 oghere.
Ekwentị dị mma maka ịse foto ndị dị anya. Nkọwa zuru ezu na saturation adịghị efu ọbụna na anya. Captnweta foto foto kwa ụbọchị na-adọrọ mmasị ọ bụla n'agbanyeghị na ọ ga-adị mkpa iji ntuziaka na-enwu gbaa
Ngwa igwefoto nke ekwentị dị mfe iji ma nyefee foto dị mma. Ndekọ vidiyo na-adị mfe ma na-eju afọ. Ekwentị nwere nhọrọ nhọrọ olu olu na-achịkwa igwefoto.
Enwere atụmatụ ndị na - atọ ụtọ ị nwere ike iji dezie foto ị were ekwentị.
Ọzọkwa vidiyo nwere ike iwere na nkịtị, HD ma ọ bụ zuru l HD ụdịdị. Nwere ike iji atụmatụ nwayọ nwayọ mgbe ị na-ewere vidiyo na vidiyo HD zuru oke.
N'ịbụ onye Kwadoro site na Qualcomm's Snapdragon 600 CPU na 2GB Ram ị na-atụ anya na ekwentị a nwere nnukwu arụmọrụ na nsụgharị nsụgharị. Site na mgbawa ihe eserese Adreno 320, ekwentị a ga-agbasasị nke ọma site na ihe ọ bụla egwuregwu ị họọrọ igwu.
Infinity PadFone di egwu. Ọ naghị ada mbà ma zute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmanya niile ndị ọrụ nwere banyere PadFone